ဟာသ ပလာဇာ - PYAY GTI
HomeMy PageFriendsPhotoVideoForumHistoryEbooks RequestEnglish LearningGroupMysterious PalaceFood ChannelIdea WorldCartoon LoverHurmour PlazaPoem LoverGreeting TeamBlogNotesEventChatMyanmar Font
All GroupsMy Groups ဟာသ ပလာဇာ
Created by သူ စင် ကြယ်
ဘဝ အမောတွေ ပြေဖို့.........ရယ်စရာ ဟာသ ကဗျာ ကာတွန်း ဆောင်းပါး သရော်စာ တိုလီမိုလီ....
``မင်းအဖေ မှန်အသစ်မယူလာမချင်းပေါက်နေတဲ့အပေါက်ကိုမင်းရဲ့ဖင်ပြောင်နဲ့ပိတ်ပေးရမှာပဲ၊နားလည်ထား။´´ ပီတာလေးမျက်ရည်များကြားကပြောသည်။
``ကျွန်တော်ထမင်းစားချိန်မှာ ကျွန်တော့် အစားမေမေ ပိတ်ပေးနော်။´´
You need to beamember of ဟာသ ပလာဇာ to add comments!
Comment by သူ စင် ကြယ် on June 28, 2011 at 9:45pm လီလီထွေး...လဒူ...မျောက်ရှုံး....ချောစု...:P Comment by သူ စင် ကြယ် on June 28, 2011 at 9:44pm Comment by zay yar linn ( 95 EP) on April 13, 2011 at 9:00pm ပန်းခြံတခုအတွင်းမှ ခုံတန်းတခုတွင် သမီးရည်းစားစုံတွဲ တစ်တွဲထိုင်နေသည်။
ခုံတန်း၏ တစ်ဖက်စွန်းတွင်လည်း အဖိုးအိုတစ်ဦး စာအုပ်ဖတ်နေလေသည်။
သမီးရည်းစားစုံတွဲ တွတ်တီးတွတ်တာ ပြောသမျှကို အဘိုးကြီးအတိုင်းသား ကြားနေရ၏။
မိန်းကလေးက "မောင်၊ ဇက်ကြောတွေတက်လာသလိုပဲ"
ကောင်လေးက လည်တိုင်လေးကို ခပ်ဖွဖွနမ်းလိုက်၏
ခဏကြာသော်... "မောင်၊ လက်တွေကလည်း ဘယ်လိုဖြစ်တယ် မသိဘူး၊ တဆစ်ဆစ်နဲ့"
ကောင်လေးက ဘယ်ညာလက်အစုံကို တယုတယ နမ်းပေးလိုက်၏။
တဖက်တွင်ထိုင်နေသော အဘိုးကြီး အတော်ကို နားကြားပြင်းကတ်လာ၏။
ဟေ့..ဒီမှာမောင်ရင်၊ ဖြစ်နိုင်ရင် ဦးကိုလည်း ကူညီစမ်းပါဦးကွ
'ဦးမှာ လိပ်ခေါင်းဖြစ်နေလို့' တဲ့
Comment by Kyaw Soe Minn on March 27, 2011 at 10:18am ကက်စီနို ကက်စီနို ကက်စီနို(ကိုဇေယျာလင်း95EP)
ကက်စီနို လောင်းကစားဝိုင်း ခုံတခုမှာ ဒိုင်လုပ်သူနှစ်ယောက်ဟာ ထိုးသားမရှိလို့ ပျင်ပျင်းရိရိဖြစ်နေကြတယ်။ ရုတ်တရက် တောင့်တောင့် ဖြောင့်ဖြောင့်နဲ့ ရုပ်ချောချော မိန်းမငယ်လေး တစ်ယောက် ရောက်လာပြီး ခုံပေါ်ကို ဒေါ်လာ နှစ်သောင်း ပြစ်တင်လိုက်တယ်။ “အကုန်လောင်းတယ်၊ အန်စာ တစ်ချက်ပဲ ခေါက်မယ်။ ဒါပေမယ့် တခုတော့ ရှိတယ်နော်၊ ကျွန်မက အင်္ကျီမပါပဲ အန်စာခေါက်ရင် ကံကောင်းတတ်လို့ ရှင်တို့ စိတ်မရှိဘူးဆိုရင် အင်္ကျီတွေ အားလုံးချွတ်ပြစ်ချင်တယ် “ ပြောပြောဆိုဆို အ၀တ်တွေ ချွတ်ချလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ “အ၀တ်အသစ်တွေ ၀တ်နိုင်ပါစေ.. “ လိုအော်ပြီး အန်စာခေါက်လိုက်တယ်။ “ ဟေး.... နိုင်ပြီဟေ့ နိုင်ပြီ ” အားရပါးရ ခုန်လိုက်ပြီး ဒိုင်လုပ်သူ နှစ်ယောက်ကို ထဖက်တယ်။ ချက်ချင်းပဲ သူအ၀တ်နဲ့ အနိုင်ရတဲ့ ပိုက်ဆံတွေ ယူပြီး အမြန်ထွက်သွားတော့တယ်။ အဲ့ဒီတော့မှ ဒိုင်တစ်ယောက်က ရုတ်တရက် အသက်ပြန်ဝင်လာသလို သူဘေးက အဖော်ကိုလှမ်းမေးတယ်။ “ သူ့ အန်စာက ဘာကျသွားတာလဲ” ကျန်တစ်ယောက်က “ ဟေ.... မသိဘူးလေ ငါက မင်းကြည့်လိုက်တယ်ထင်လို့” Comment by သူ စင် ကြယ် on March 1, 2011 at 1:03am အထင်ကြီးမိခါမှ ...
ရတနာထွန်း အတွဲ ၂၆၊ အမှတ် ၅၀၇ (၂၅၊၂ - ၃၊၃ ၊ ၂၀၁၁)
"ကျွန်တော့ကို လစာတိုးပေးသင့်နေပြီဘော့စ်၊ကျွန်တော့ကို နောက်ထပ် ကုမ္ပဏီသုံးခုကတောင် လိုက်ချဉ်းကပ်နေပြီ"လို့ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်က သူ့ရဲ့ အလုပ်ရှင်ကိုသူ့ကိုလစာတိုးပေးဖို့ လာပြောပါတယ်။
သူ့အလုပ်သမားကို တခြားကုမ္ပဏီကနေ ပိုက်ဆံပိုပေးပြီး ခေါ်ဖို့ပြင်နေ တယ်လို့ ထင်သွားတဲ့ အလုပ်ရှင်က "ဒီလိုဆိုတော့ မင်းနောက်ကို ဘယ် ကုမ္ပဏီတွေကများ လိုက်ချဉ်းကပ်နေတာလဲ"လို့မေးတော့ သူပြန် ဖြေ တာက
Comment by သူ စင် ကြယ် on February 25, 2011 at 1:21am ၅နှစ်အရွယ်နှင့် ၇နှစ်အရွယ် ညီအစ်ကို ကလေးနှစ်ယောက်တို့
လိုက်ပို့စရာရှိလို့ ဆိုပြီး ခွင့်ယူသွားပါတယ်ရှင် ”
“ဟွန့် မေမေပဲပြောတယ်လေ။ ဒီနေ့ လုပ်ရမယ့် အလုပ်ကို မနက်ဖြန် မရွှေ့ပါနဲ့ဆို...”
“ဘေးခန်းက ဦးလေးကြီး သူအလုပ်သွားတော့ မမီမှာစိုးလို့
အိမ်ကအင်းခွေးကြီးကို ကြိုးဖြည်ေ Comment by သူ စင် ကြယ် on February 20, 2011 at 12:28am ဆရာမ။ ။ ကိုယ်ပြောနေတာကို စိတ်ဝင်စားမှန်းမသိ၊ မ၀င်စားမှန်းမသိဘဲ
စားပွဲထိုး။ ။ ဆရာ ကော်ဖီက ဘလက်ကော်ဖီဘဲ ယူမှားလားခင်ဗျာ
စားသုံးသူ။ ။ မင်းတို့ဆိုင်မှာ ကော်ဖီကဘာအရောင်နဲ့များရသေးလို့
ကောင်လေး။ ။ ကိုယ်မင်းလက်ကလေးကို ကိုင်ထားပါရစေ။
တရားဟောဆရာ။ ။ ဆမ်.. ငါ့ကို အမှန်အတိုင်းပြောစမ်း. . . မင်းဟာထမင်းမစားခင်မှာ
ဆရာမ။ ။ ကဲ တစ်ထပ်တည်းကျတဲ့ တိုက်ဆိုင်မှု တစ်ခုခုကို နမူနာ ပြောပြ
ဆရာမ။ ။ နေနဲ့လ ဘယ်ဟာက ပိုပြီး တို့တွေအတွက် အရေးကြီးတယ် ထင်သလဲ
ဆရာမ။ ။ ဆမ် မင်းဟာတော်တော်ကို စကားများပါလား
ဆမ်။ ။ ကျွန်တော့်အဖိုးက နိုင်ငံရေးတရားဟောတဲ့သူ၊ ကျွန်တော့်အဖေကတော့
သူ့မိန်းမ ဖြစ်သူအနားရောက်လာပြီး သူ့ယောကျာ်းရဲ့ဇက်ပိုးကိုအုပ်လိုက်ပါတယ်။
"ရှင့်မြင်းမက မနေ့ညက ဖုန်းဆက်တယ်ရှင့်........:P
"ရပါတယ်၊ ဒါဆိုလဲ ကိုးလလုပ်ဗျာ............. :P
"နှစ်ခုစလုံးပဲရှင့်။ည ခြောက်နာရီတိတိမှာ ရှင်အိမ်ပေါ်ကဆင်းစေချင်တယ်".....:P
မျက်ရည်စက်လက်နဲ့အိမ်ထောင်ရှင်မတစ်ဦးဟာ တရားသူကြီးတစ်ဦးရှေ့မှောက် ခုလိုတိုင်တန်း
"ဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ် တရားသူကြီးမင်းရှင့် ။ ကျွန်မကလေးသုံးယောက်စလုံးရဲ့
မျက်နှာတွေကိုအကဲခတ်ကြည့်ရတာ တစ်ယောက်မှသူနဲ့မတူပါဘူးရှင့်။ :P
လင်ယောကျာ်းဖြစ်သူက မမျှော်လင့်ပဲ ခရီးထွက်ရာကပြန်လာခဲ့ပါတယ်။အိမ်မှာ သူ့ဇနီးဟာ
"တွေ့တယ်မဟုတ်လား။အစတည်းကကျွန်မပြောသားပဲ။သူကခပ်တုံးတုံးပါလို့............:P Comment by သူ စင် ကြယ် on February 11, 2011 at 10:11pm လျှို့ဝှက်ချက် ...
ရတနာထွန်း အတွဲ ၂၆၊ အမှတ် ၅၀၅ (၁၁-၁၇ ၊ ၂ ၊ ၂၀၁၁)
ဒါနဲ့ ဌာနမှူးက "ခင်ဗျားက ဘာမေးမှာမို့လို့ ဒီလောက်အရေးတကြီးတွေ့ ချင်နေရတာလဲ"လို့မေးတော့ အဲဒီလူ ပြန်ပြောတာက "ကျုပ်က ဒီလူ ကျုပ်အိမ်ထဲကို ကျုပ်မိန်းမအိပ်ပျော်နေတာ မနိုးအောင်ဘယ်လိုဝင်နိုင်ခဲ့ လဲဆိုတာသိချင်လို့ဗျ။
Comment by သူ စင် ကြယ် on December 21, 2010 at 2:44am ပြောတတ်ပါပေ့
ရတနာထွန်း အတွဲအမှတ် (၂၅ ၊ အမှတ် ၄၉၇)
နိုင်ငံမတူတဲ့သူနှစ်ယောက် ဆုံကြတဲ့အခါ ပထမတစ်ယောက်က သူ့နိုင်ငံ က လူတွေက လကမ္ဘာကို အရောက်သွားနိုင်တယ်လို့ပြောလိုက်သတဲ့။ ကျန်တဲ့တစ်ယောက်ကလည်း "ကျုပ်တို့ဆီက လူတွေကတော့ နေပေါ်မှာ ကို ခြေချခဲ့တာဗျား"လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါနဲ့ ပထမလူက မဖြစ်နိုင်ဘူး၊ နေက ဒီလောက်ပူတာ ခြေချဖို့ မပြောနဲ့ ကပ်တောင်ကပ်လို့ မရဘူးလို့ပြောတော့ ဒုတိယလူက ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွား ဟန်နဲ့ဆိုတာက"ဟုတ်တယ်လေ။ကျုပ်တို့က နေ့ဘက်သွားတာ မဟုတ် ဘူး။ ညဘက်သွားတာ"တဲ့။
Comment by သူ စင် ကြယ် on December 3, 2010 at 7:08am ‹ Previous
Welcome toPYAY GTI
U Ba Gyam's cartoons
Started by Kyaw Soe Minn Feb 14, 2011. View All
© 2014 Created by PYAY GTI. Powered by